Baiboly pejy 696 - Ny Baiboly
Voalohany < 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 Manaraka Farany
Jakoba toko 2 (tohiny)
20Fa moa te-hiaiky va hianao, ry olom-poana, fa tsy vanona ny finoana tsy omban'asa? 21Moa tsy ny asa va no nanamarinana an'i Abrahama razantsika, tamin'izy nanolotra an' Isaaka zanany teo ambonin'ny otely? 22Hitanao fa niara-nanao ny finoana sy ny asany; ary ny asa aza no nahatontosa ny finoany. 23Dia tanteraka ny Soratra Masina hoe: Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka notanana ho fahamarinany izany, sady nantsoina hoe sakaizan'Andriamanitra izy. 24Hitanao amin'izany fa hamarinina amin'ny asa ny olona, fa tsy amin'ny finoana fotsiny ihany. 25Toy izany koa Rahaba, vehivavy janga; moa tsy nohamarinina tamin'ny asa va izy, dia tamin'ny nandraisany an'ireo irak'i Josoe, sy nampandehanany azy tamin'ny làlan-kafa? 26Toy ny ahafatesan'ny vatana tsy misy fanahy no ahafatesan'ny finoana tsy omban'asa koa.
Jakoba toko 3
Fototry ny haratsiana maro ny lela - Ny fahendrena marina sy ny tsy marina.
1Ry rahalahiko, aza dia maro loatra aminareo no ho mpampianatra, satria fantatrareo fa ho mafimafy kokoa ny fitsarana anay. 2Fa manota amin'ny zavatra maro isika rehetra. Raha misy tsy manota amin'ny teny, olona lavorary izy, ka mahafehy ny tenany rehetra koa. 3Raha te-hitondra ny soavaly isika, ny vavany no asiantsika lamboridy, dia zakantsika mbamin'ny tenany rehetra koa. 4Jereo koa ange ny sambo: fanamory kely foana no anodinan'ny mpitondra azy amin'izay tiany, na toy inona habeny, na ahoana hamafin'ny rivotra manoha azy. 5Toy izany koa ny lela: rantsam-batana kely foana izy, nefa zava-dehibe no mety ho vitany. Jereo izay afo kely foana: dia ala lehibe manao ahoana no doroany! 6Ny lela koa dia afo; fototry ny haratsiana maro izy. Eo amin'ny rantsam-batantsika, dia izy no mandoto ny tenantsika manontolo; arehitry ny gehen'afo izy, ka mandrehitra ny fandehan'ny andro iainantsika. 7Azo folahina avokoa ny biby isan-karazany, ny vorona, ny biby mandady, mbamin'izay any an-dranomasina, ka efa voafolaky ny olombelona; 8fa tsy misy olona nahafolaka ny lela na dia iray aza. Zava-mandoza tsy laitra tohanana izy, sady feno poizina mahafaty. 9Izy no isaorantsika an'Andriamanitra Raintsika, nefa izy ihany koa no anozonantsika ny olona izay natao mitovy endrika amin'Andriamanitra: 10koa iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana. Tsy mety anefa ny toy izany, ry rahalahiko. 11Moa ny vavan'ny loharano iray va mamoaka rano mamy sy mangidy? 12Moa ny aviavy, ry rahalahiko, mety mamoa oliva; na ny foto-boaloboka va, mamoa voan'aviavy? Toy izany koa, ny loharano masirasira tsy mahay mamoaka rano mamy.
13Iza eo aminareo no hendry sy manan-tsaina? Aoka hasehony amin'ny fitondrany tena tsara ny asan'ny halemem-panahy amam-pahendreny. 14Fa raha fialonana mangidy sy fifampiandaniana no ao am-ponareo, dia aza mirehareha, fa mandainga manohitra ny marina. 15Tsy mba fahendrena avy any ambony izany, fa avy amin'ny tany, sy ara-batana, ary avy amin'ny demony; 16satria izay misy fialonana sy fifampiandaniana, dia tsy maintsy misy fikorontanana sy izao asa ratsy rehetra izao koa. 17Fa ny fahendrena avy any ambony kosa dia madio aloha, ary koa tia fihavanana, mandefitra, mora toroana, be indra fo amana voka-tsoa, tsy miangatra, tsy mihatsaravelatsihy. 18Ary izay mampihavana dia mamafy ny vokatry ny fahamarinana amin'ny fihavanana.
Pejy: Voalohany < 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3119 seconds